Arts & Humanities » Predestination (2014) – ကြည့်မိသမျှ	34
တောင်ပေါ်သား says: ဖတ်လို့လည်းပြီးရော
ဟဲ ဟဲ စတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: မကြည့်ဘူးဆိုရင်လုံးဝမကြည့်ပဲ… ကြည့်မယ် ဆိုရင် “ဒါဖတ်ပြီးမှ ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ကြပါ” လို့ အော်ချင်ပါတယ်
တောင်ပေါ်သား says: အေးပါကွယ် အေးပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
Alinsett@Maung Thura says: ကြည့်စရာ မလိုလောက်အောင်ကို ညွှန်းထားတာလားဟင်… အလကားစတာ..
အူးစည် says: ဆရာမ၀ါဝါ၀င်းရွှေ အသေးစားညွှန်းမှပဲ.. အဲ့ကား ပိတ်ရက်ကြည့်အူးမယ်ဗျာ..
ခင်ဇော် says: အဲ့ကားးကြီးး ကြည့်ပြီးး အိပ်ပျော်သွားးလို့ ဟိုနေ့က..!!
pooch says: Cindrella အရင်ကြည့်မယ်လို့ ဒီမှာ ရုံတင်နေပြီ
ထုံးစံအတိုင်း ၀ယ်ထားတာတွေ ကုန်မှ ပဲ နောက်တခေါက်ဆိုင်ထပ်သွားမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: စင်ဒရဲလားးကို လိုင်းးပေါ်ရောက်တဲ့ထိ စောင့်အူးးမှာာ
Wow says: ရုပ်ချင်ကန်ပနီက တရားစွဲဂျဘာာာာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: ငင်…!!
မြစပဲရိုး says: မင်းသား ကို ရော မင်းသမီး ကိုရော လုံးဝ မသိဘူး ဇီ ကလေး ရေ။
အနာဂါတ် မှာ ဖြစ်မှာ ကိုလဲ ကြိုသိ ရမှာမို့ Time Machine ခမျာ အတိတ် သွားလိုက် ၊အနာဂါတ် ရောက်လိုက် နဲ့ ခမျာ ခေါင်းအတော်စား မယ်။ လက်တွေ့မှာလဲ တကယ်တော့ အတိတ် ကို ပြန်ဖျက် နိုင်ပါတယ်။
ခင်ဇော် says: BC ပေးးလိုက်ပါတယ် အရီးးရေ.
မြစပဲရိုး says: ဟိ ဟိ။ Thanks. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: မြန်​တျာန့်​ဘာသာနဲ့ စာတမ်းထိုး​ပေးရင်​​တော့ကြည့်​ချင်​သား
အဲ့ဒါမှ လုံး​စေ့ပတ်​​စေ့နားလည်​မှာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: ကိုနီ
naywoon ni says: ဟမ်​မ​ရေး အင်​တာနက်​က မကျိနိုင်​ပါပု ။ အခု ရွာထဲ စဉ်​ဆက်​မပြတ်​၀င်​နိုင်​​ရုံ​လေး​တောင်​ လက်​ဖက်​ရည်​ဖိုးထဲက လက်​ဖက်​ရည်​မ​သောက်​ပဲ ထည့်​​နေရတာပါ​ညှော်​ ။ သူဂျီးဆီက ပိုက်​ပိုက်​ထုပ်​ပြီးမှ Disc ၀ယ်​ကျိမှာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ပြုံး၍လည်း ရွှီးတာကို နားထောင်တော်မူပါတယ်။
အဘနီမန့်သကဲ့သို့ မြန်မာ့ကော်နက်ရှင်နှင့်…… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
weiwei says: အညွှန်း​ကောင်းလို့ ကြည့်​လိုက်​ပါအုန်းမယ်​။
ခင်ဇော် says: ကြည့် ဖြစ်အောင်ကြည့် ဖို့ ညွှန်းးတာမျိုးး မဟုတ်ပေမယ့်
Mike says: . ကြည့်မယ် ဆိုရင် “ဒါဖတ်ပြီးမှ ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ကြပါ” ..လို့ပေါထား..အဲလေ.ပြောထားတော့
.ဖတ်ပီးသွားပီဆိုတော့…ကျိမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: တညားးးကို
Mr. MarGa says: သေချာတယ်
အညွှန်းလေး ရေးမပေးချင်ဘူးလား ဟင် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: အပေါ်မှာ လိုက်ရေကြည့်…
uncle gyi says: ဒီလိုရုပ်ရှင်အညွှန်းဒီတခါဖတ်ဖူး
ခင်ဇော် says: တညားး က ညွှန်းးတာ ဟုတ်ဘူးးလေ.
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ဟိုရက်က ကြည့်တဲ့ Special Force ကားလေး မိုက်တယ်။
black chaw says: နောက်တစ်ကား ညွှန်းဖို့ အချိန်ကျနေပြီ ဆိုတာလေး
ခင်ဇော် says: နောက်တစ်ကားက ကြည့်ထားတာ များပြီး ဘယ်ဟာညွှန်းရမှန်းမသိလို့။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟိုနေ့က မမဂျီးရဲ့ ဖဘက ဇာတ်လမ်းနာမည်ရေးပေးထားတာတွေကို စခွင်ရှော့ပြီး သကာလ အခွေဆိုင်မှာ ရသလောက် ဝယ်ထားတယ်… ဒီကားလည်း ရှာကြည့်ပြီး ဝယ်ကြည့်မယ်လို့စ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3713
လုံမလေးမွန်မွန် says: အဟိ.. ဒီပို့စ်ကို တွေ့တာကြာပြီ.. Predestination ဆိုတာ Final Destination အဆက်ထင်လို့.. ဝင်မဖတ်တာ… အဲ့ကားတွေကို ကြောက်လို့ မကြည့်ဘူး.. ခုမှ အားတင်းပြီး ဝင်ဖတ်တာ.. ဟိဟိ
ခင်ဇော် says: ခု နောက် တစ်ကား တင်ပြီးပြီလို့(စ)